Halka lagu qabanayo shirka maamul u sameynta Hiiraan iyo Sh/Dhexe oo lagu dhawaaqay – STAR FM SOMALIA
Wareegto ka soo baxday Xafiiska Madaxweynaha ayaa lagu dhawaaqay in magaalada Jowhar ee xarunta Gobolka Shabeellaha Dhexe lagu qaban doono shirka maamul u sameynta gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe.
Sidoo kale wareegtada ayaa lagu sheegay in magaalo madaxda Maamulka Hiiraan iyo Sh/dhexe ay noqoneyso degmada Buulo Burte ee Gobolka Hiiraan.
Wareegtada ayaa lagu sheegay in Madaxweynaha uu tixgeliyay dareenka shacabka, isla markaana dhageystay soo jeedinta odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda labada gobol.
Hadaba Wareegtada ayaa u qorneyd sidan:-
Markuu Arkay : SharciLr. 116 ee soo baxay Ogosto 6, 2013 kuna saabsan sharciga maamullada Degmooyinka iyo Goballadadalka
Markuu Tixgaliyey :Dareenka dadweynaha iyo Soo jeedinta odoyaasha Dhaqanka iyo siyaasiyiinta ka soo jeedo Ee Goballada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe
Markuu Garwaaqsaday: in ay lagama maarmaan tahay ilaalinta wadajirka shacabka Soomaaliyeed iyo Xallinta khilaafaadyada iyo in ay jirto baahi loo qabo dhisidda Maamullada Gobollada Iyo Degmooyinka dalkasi ay u dhisman Dowlad- goboleedyo Dastuurka waafaqsan
Waxauu Madaxwaynaha J.F.S ansixiyay laga billaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 19/12/2015 in Magaalada Buulaburde oo ka mid ah degmooyinka Gobalka Hiiraan ay noqoto Caasimadda Maamulka KMG ah ee Goballada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ay yeelanayaan.
Waxa uu Xeerkaan dhaqan gelayaa marka uu Madaxwaynuhu saxiixo, waxaana lagu soo daabici doonaa Faafinta Rasmiga ah Dowladda JFS.
Madaxweynaha oo ka qeyb galay sanad-guurada 72aad ee aas aaska Ciidamada Booliska (Daawo Sawiro)